Mụta Eke Ọgba site na mmemme | Site na Linux
Mụta Python site na mmemme
Daysbọchị ndị a enwetala m n'etiti nku anya m ịmụ mmemme na Python, ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị ihe ndị bụ isi.
En Nnaemeka Han bipụtara ndu nke nwere ihe ederede 2, na-egosi usoro iji mụta mmemme na Python. Ihe dị ukwuu gbasara ngwa a bụ na ọ na-eduga na tiori yana omume, a ga-ebipụkwa ya na Tuesday ọ bụla. O doro anya na ọ bara uru ile anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Mụta Python site na mmemme
Daalụ nwanne maka ozi ahụ. Ọ ga-enyere m aka nke ukwuu ebe m na-achọ ịmụ ụfọdụ mmemme ọbụlagodi na ọ bụ otu ị sị ekwu "isi ihe".
Ana m asị gị nnọọ. Ozi ahụ dị, anyị ga-ekekọrịta ya 😀
Ezigbo mma 😀
Dika onye ozo na-achoghi igwa spam, enwekwara ezigbo ntuziaka site na peeji nke mundogeek (dot) com na pdf, aguru m ma a ghotara ya nke oma.
Gịnị bụ njikọ ya? Python ọ ga-abụ nke onye ọ bụla?
Ee ee, nke ahụ bụ, echere m na amaara ya nke ọma, ọ bụ ya mere na ahaghị m njikọ XD ahụ. Akwadoro ya nke ukwuu ebe ọ nwere ihe ọmụma zuru oke na o nwere ngalaba dịka okwu oge niile na akụkụ nke iji web rụọ ọrụ.
Dị ka mgbakwunye, enwere nduzi abụọ ị nwere ike ịhụ.
1.- Site na crackslatinos ftp, nkuzi nkuzi nke RicardoNarvaja mere, nke m si mụta ọtụtụ ihe:
2. - Akwụkwọ ọzọ m na-agụ bụ «Mụta iche echiche ka onye mmemme na Python». ruo ugbu a ọ dị ezigbo mma na nke ọma:
Daalụ maka njikọ ndị ahụ, ọ ga-arụrịrị ọrụ karịa otu. 😀
N'ezie ha arụ ọrụ, daalụ Jhals.
Daalụ maka ihe niile Mr. elav. "Desdelinux.net" abụwo nkwado bara uru (ma bụrụkwa).
Lee anya na nke a 😀 http://pythonya.appspot.com/Banyere ntuziaka mastersdelweb, enweghị m mmasị na ọ na-amalite na njehie na koodu ahụ na-enweghị isi ihe ndị bụ isi. Mana onye obula jiri ihe omumu banyere ihe omumu dika o kwesiri, obu ezie na oputaghi na odi ire, aghaghi ihu.
B BLGH. dijo
Daalụ maka ozi ahụ, ọ sitere na 10.
Ha nwere ike ịga na saịtị ahụ http://www.aprenderpython.org Nwere ike ịchọta nkuzi vidiyo, akwụkwọ zuru ezu n'asụsụ Spanish, isiokwu, nzukọ, wdg.
N’oge na-adịghị anya, ha ga na-ebugote Python na MySQL vidiyo vidiyo, yana isiokwu akpaaka.
FSF weputara mkpọsa megide SecureBoot ọhụrụ